साँच्चिकै मुटु छुने भिडियो : बाबालाई कोरोना पोजिटिभ आएपछि (भिडियोसहित) – Janata Times
परिवारको सदस्यलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि, पारिवारिक माहोल कस्तो हुन्छ होला ? सायद भोग्नेले जति अरुले भन्न सक्दैनन् । श्रीमानश्रीमति, छोराछोरी होस् वा हजुरबुबा हजुरआमा सबैको मनमा चिसो पस्छ । त्यसैमाथी, परिवारका अन्य सदस्यमा पनि संक्रमणको जोखिम । विश्वमा दश लाख र नेपालमा सात सयभन्दा धेरैको ज्यान लिएको रोग लागेपछि उपचार गरौंला भन्नलाई औषधि छैन। ज्यानले कति धान्न सक्छ, त्यसैको भर हो।
यस्तै, परिस्थितिबीच गुज्रिएका एक परिवारको सन्देशमूलक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ, नबिल बैंकले.३ मिनेट २६ सेकेण्डको यो भिडियो एक दिनमै ढेड लाखले हेरिसकेको र फेसबुक पेजमा सयौंका मन पराएका प्रतिक्रिया आएको नबिल बैंकले जनाएको छ। भिडियो आम नेपालीले देखेको र भोगेको सामान्य घटनाको छ तर निकै शक्तिशाली । तीन जनाको परिवारमा बाबुलाई कोभिड–१९ पोजिटिभ आउँछ। श्रीमतिको मन अमिलो हुन्छ।
‘सब ठिक हुन्छ, केही हुँदैन,’ ढोका बाहिरबाटै भन्छिन् तर आँसु लुकाउन सक्दिनन्। छोरीका साथीले दसैंको लागि कपडा किनिसके। ‘यसपाली त दसैं आएको मनै परेको छैन्,’ भिडियो कलमा छोरीले आँसु चुहाउँदै साथीलाई भन्छिन्। अन्ततः दसैंको दिन बाबाको रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ। परिवारमा खुसी छाउँछ। दसैं रमाइलो हुन्छ। सुन्दा सामान्य लाग्ने यस भिडियोमा कलाकारको अभियन प्रशंसनीय छ।
शनिबार सार्वजनिक गरिएको भिडियोलाई छोटो समयमै धेरैले मन पराएको बैंकका सञ्चार विभाग प्रमुख कृष्ण सुवेदीले बताउनुभयो । कोरोना संक्रमणबाट दिन प्रतिदिन सयौं नेपाली संक्रमित भइरहेका छन् । बैंकका कर्मचारी, ग्राहक र आम नेपाली संक्रमण भइरहेको अवस्थामा केही सकारात्मक सन्देश दिनको लागि यस सन्दशेमूलक भिडियो निर्माण गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो । भिडियोलाई दर्शकहरुले पनि निकै मन पराएका छन्।
Related tags : साँच्चिकै मुटु छुने भिडियो : बाबालाई कोरोना पोजिटिभ आएपछि (भिडियोसहित)
कोरोनाका कारण नेपालमा नै अड्किएका अफ्रिकन खेलाडीलाई ३ लाख सहयोग
समातिए कारेनाको त्रासमा मास्कमा कालोबजारी गर्ने आठ ब्यापारी
मनोरञ्जनशिक्षा / स्वास्थ्यसमाचार
यस्ता खानेकुरा खानुहोस, जस्ले बढाउँछ तपाईंको यौन क्षमता
अन्तर्वार्ताअर्थपत्रपत्रिकामूख्य समाचारविचार / ब्लग
जनअपेक्षा र कोरोनाको चुनौति सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउछ : डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री (अन्तर्वार्ता)